DHIIGGA UKUNTA DIGAAGA: SABABAHA AAD U QABAN LAHAYD, MA CUNI KARTAA - BEERAHA DIGAAGA
Waa maxay sababta uu dhiiggu ugudbanyahay ukumaha digaaga
Digaagga dillaaca si loo soo saaro ukunta ama hilibka waa shaqo fudud oo aad u badan. Dad badan ayaa raba in ay ku yeeshaan cuntada waa ukunta iyo hilibka, oo si buuxda u hubsan. Laakiin habka digaaga digaaga ah waxaa laga yaabaa inay jiraan waxyaabo aan fiicnayn, xalka u leh aqoonta iyo waayo-aragnimada loo baahan yahay. Mid ka mid ah dhibaatooyinkan soo noqnoqonaya waa muuqaalka dhiigga ee ukunta.
Xaalad sida dhiigga digaaga digaaga ayaa leh sababo macquul ah:
Feejignaan daran iyo / ama isdaba-joog ah shimbir;
dhibaatooyinka cuntada (cuntada aan dheellitirneyn, cuntada tayada liita, cuntada aan ku filneyn);
daciifinta difaaca jirka;
cudurro kala duwan iyo caabuqyo;
Maqnaanshaha ama maqnaanshaha bacaha qashinka ah;
la'aanta fiitamiinada iyo / ama macdanta;
isbeddellada da'da ee ku saabsan jirka shimbirta;
xajinta (shimbirta shimbiraha);
noocyada kala duwan ee hidde-yada, astaamaha noocyo gaar ah.
Waa muhiim! Khubaradu waxay rumaysan yihiin in dhibaatada dhiigga ee ukunta ay ka badan tahay lakabyada noocyada kala duwan ee midabka midabka leh. Digaagga leh rooga cad ayaa leh difaac adag oo xoog badanna saameyn bay ku yeelataa dhibaatadan.
Badanaa dhiiggu wuxuu ku jiraa sokorta. Laakiin mararka qaarkood waxaa jira cuduro ay xinjirta dhiigga ku jirto borotiinka ama dhiigga ukunta waxaa loola jeedaa dhiig. Mid kasta oo ka mid ah xaaladahaani waxay leeyihiin sababo u gaar ah, ogaanshaha waqtiga cilladda ah taas oo caawin doonta xallinta dhibaatada si dhakhso ah.
Dhiiga ku dar
Sababaha ugu muhiimsan ee dhiiga ku jira:
Haddii, inta lagu guda jiro habka ugxantu, digaaggu wuxuu dillaaciyay kilyaha yaryar ee ugxan-yarta, ka dibna xinjirowga dhiigga ayaa ka muuqda qadhaadh.
Badanaa, xaddi badan oo borotiinka ah ee quudinta ama qadarka xad dhaafka ah ee dheellitirka borotiinka ee cuntada ayaa sababi kara dhibaatooyin sida xinjir dhiig leh gudaha gudaha.
Wax badan ka baro daaweynta iyo ka hortagga cudurrada digaagga, rasklevy, doorka qoob-ka-shaqaynta ee geedka digaagga, go'aaminta da'da digaaga, cuntada saxda ah ee geela digaaga, fiitamiinada lagama maarmaanka ah.
Dhiig ku jirta borotiinka
Xinjirta xinjirta ayaa leh sababaha soo socda:
Shimbiraha ma helayaan qadarka saxda ah ee macdanta (walxaha sida magnesium, calcium iyo selenium aad ayey muhiim u yihiin).
Dhibaatadani waxaa lagu arkay xilliga qaboobaha sanadka, marka aysan jirin wax cagaar ah oo cusub, iyo shimbiruhu ma soo saari karaan cuntadooda u gaar ah xaaladaha dabiiciga ah.
Ogow sababta digaagga ukunta, u qaadaan ukun yar, ukunta labeen qajaar.
Raadinta dhiigga ee qolofka ayaa ka muuqda xaaladaha noocaas ah:
Haddii dhiig lagu arko qolofka, ka dibna dhaawaca shimbirta qiiqa ayaa ah sababta ugu weyn.
Xaaladahan waxaa kale oo suurtagal ah haddii geedi socodka nabarradu uu ku jiro jirka shimbirta (xanuunka ba'an ee xubnaha taranka khaasatan khatarta ah).
Haddii digaaggu qaado ukumo badan, joogitaanka dhiigga iyaga ayaa sidoo kale aan caadi ahayn. Inta badan tani waxaa lagu arkay iskutallaabta oo leh qaab jidheed.
Haddii dhibaatadu hore u socoto, waa lagama maarmaan in la bilaabo la dagaalanka sida ugu dhakhsaha badan calaamadaha ugu horreeya ee la ogaan karo. Adeecitaanka taxanaha ficilada saxda ah, si deg-deg ah oo aan lahayn wax dhibaato ah xalinta su'aal aan fiicneyn, amarkuna wuxuu ku jiri doonaa guriga.
Ma taqaanaa? Daaweynta maskaxda, waxaa jira fikradda ah qoqobka. Tani waa ujeeddo maskaxeed, kaas oo qofku ka cabsanayo walxaha qaabka loo yaqaan oval-shaped (oo ay ku jiraan ukumaha). Dhibaatadani waxay la kulantay agaasime legend Alfred Hitchcock.
Si aad u beerato digaag
Xaamilaha buka ayaa u baahan in loo wareejiyo qol gaar ah, maaddaama ay jirto feejignaan sarreysa oo ah in uu ku dhaco wax khatar ah dadka kale ee guriga deggan. Dheeraad ah, marka khatarta laga ciribtiro shimbiraha kale, mid ayaa sii wadi kara cudurka iyo daaweynta digaaga jiran (ama digaagado badan, haddii dhibaatadu aanay ku jirin shimbir).
Ku dhaq dhalatada
Qoyaanka la kariyay waa in si habboon loo dhaqo. Tani waa in la sameeyaa iyadoo la isticmaalayo farsamooyinka soo socda:
In 250 ml oo biyo diirran la burburiyo 2-3 qaado shaah miis.
Isticmaal sirinjin yar, si tartiib ah u dhaq geedka shimbirta shimbirta.
Nidaamka waxaa la sameeyaa waqti isku mid ah maalin kasta inta lagu jiro usbuuca.
Waa muhiim! Nidaamka waxaa la samayn karaa oo kaliya hadii aaney jirin ukun qashinka digaaga.
Daawooyinka Antiseptic waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu mayro, laakin la tashiga xoolaha waa qasab ka hor intaadan isticmaalin.
Si loo fududeeyo xaaladda shimbirta inta lagu jiro mudada soo kabashada, nabarka waxaa lagu dhejin karaa 3% hydrogen peroxide, iyo dusha sare ee gudaha qashinka waxaa lagu daaweyn karaa batroolka jelly. Dhammaan nidaamyada shimbir qaba ayaa lagu sameeyaa gacmo gashi.
Haddii ay jirto sabab loo rumaysto in cayayaanka uu ku dhacay infekshin, markaa, marka lagu daro dhaqidda, daawada Metronidazole waxaa loo isticmaalaa gudaha. Maalinta shimbirku waxay bixisaa nus ama rubuc kiniin ah (iyadoo ku xiran culeyska digaaga). Daawada waa in lagu kala diraa heerka biyaha ee digaaga. Koorsada daaweynta waa 5-6 maalmood.
Si looga hortago dhibaatadan aan fiicnayn ee dhacaya, waa inaad raacdaa xeerarka fudud:
abuuro shuruudaha lagama maarmaanka u ah shimbiraha (u hoggaansanaan heerarka nadaafadda iyo nadaafadda, nadiifinta qolka, baqashada iyo quudinta);
ilaaliyaan cunto dheellitiran oo buuxa. Xilliga qaboobaha waxaa lagama maarmaan ah in lagu kordhiyo raashinka leh nafaqooyin kala duwan;
si loo yareeyo shimbiraha ka yimaada cadaadiska (si loo siiyo meel ku filan hal shakhsi, si loo xakameeyo saacadaha iftiinka, si ay u quudiyaan shimbiraha xaddiga saxda ah iyo jadwalka);
samee baaritaano joogto ah oo wac si aad u ogaato baaritaanka jadwalka ee qorshaysan.
Haddii aad raacdo talooyinkan fudud oo aad u muujiso shimbiraha, cudurku waa uu dhaafi doonaa.
Suurtagal ma tahay in la cuno ukun dhiig leh
Haddii digaag la dhigo ukumo dhiig leh, markaa su'aasha ugu horreysa ee marti-geliyeyaashu waa haddii ay suurtogal tahay in la cuno cuntadan. Jiritaanka dhiigga ku yaal dibedda qolofta khatar kuma aha caafimaadka bini'aadamka.
Waxyaabahaan waxaa loo isticmaali karaa ukun joogto ah, mana jiraan xayiraad diyaarinta saxarada. Waa muhiim inaad si fiican u dhaqdid ka hor inta aadan isticmaalin (badeecada la dhaqay lama kaydin karo wakhti dheer).
Soo ogow haddii aad cuni karto ukumo cayriin ah, marka loo eego digaag, digaag, ostriche, goose, duck, ukumaha lo'da ee guinea, sida loo dhigo ukunta digaaga.
Xaaladda marka xinjiruhu ku dhex jiraa ukunta, go'aanka u isticmaalka cuntada waa adiga. Veterinarians waxay aaminsan yihiin in dhiqlan yaryar oo dhiig ah aysan keenin khatarta, haddii ukuntu ay dhaafto daaweynta kuleylka oo buuxa.
Ka hor inta aanad karin, ka saar xinjiraha alaabta. Tan waxaa lagu sameyn karaa dhammaadka fiiqan ee fargeeto, mindi ama cutlery kale.
Ma taqaanaa? Hooyadu waxay soo saari kartaa ukum la'aan la'aantiis, laakiin digaagga kama dillaacayaan iyaga. Ukunta noocan ah waxaa caan loo yaqaana "dad wada hadal".
Joogitaanka dhiigga ee digaaga digaaga waa dhibaato caadi ah oo si dhakhso ah loola wareegi karo loona awoodi karo. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in la ogaado dhibaatada wakhtiga, go'aaminta ciladeynta iyo si sax ah u qaadaan daaweynta.
Waa maxay sababta uu dhiiggu ukumo u yahay: dib u eegis
Sababtu waxay noqon kartaa qaar badan.
Cudurka Newcastle, Cudurka Marek, caabuqyada bakteeriyada, E-hypovitaminosis.
Marar badan, ka mid ah kuwan ka soo dillaacsan ee koofiyadaha ee qashinka ah ee ku xadgudubka soo saarka ukunta. Waxaa laga yaabaa inay sabab u noqoto iyo infekshanka qashinka. Waxaa lagama maarmaan ah in la eego calaamadaha ay yihiin - jebinta isku duwidda dhaqdhaqaaqa, tufaaxa madaxa, qoorta, baalasha dhogorta. is dabajooga iyo curyaanimo ee addimada, hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka ukunta ilaa 30-40%, ukumo yaryar oo leh daboolka dhiigga, hatchability badi digaagga ...
Xidhanaanta dhiigga waxay ka timaadaa soo ururinta aan guuleysaneynin qoob-ka-soo-bax sare ama marka cirridku culus tahay digaagga, i.e. Tani waa haddii aan ka reebno cudurka, inta badan waxay ku dhacdaa ukunta labaad ama saddexaad.